कस्ताे दुखाइलाइ पिरियडिक माइग्रेन भनिन्छ ? याे कति प्रकारका हुन्छन् ? - ज्ञानविज्ञान
माइग्रेन विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, तीमध्ये पिरियडिक माइक्रेन पनि एक हो, अत्याधिक टाउको दुख्ने । माइग्रेन टाउको दुखाइको एक प्रकार हो। समान्यतयाः चिकित्सकले टाउको दुखाइलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरेका हुन्छन्।एउटा प्राइमरी टाउको दुखाइ, अर्को सेकेन्डरी टाउको दुखाइ
प्राइमरीमा पनि ३ प्रकार छन्। ती हुन्ः माइगे्रन, टेन्सन टाउको दुखाइ र कलस्टर टाउको दुखाइ।प्राइमरी टाउको दुखाइको कारण अहिलेसम्म यकिन नभएको अवस्था छ। कुनै रोगका कारण टाउको दुख्छ भने त्यो सेकेन्डरी टाउको दुखाइ हो। जस्तैः आँखाको कारणले दुख्छ भने या दिमागमा केही समस्या भई टाउको दुख्छ भने त्यो सेकेन्डरी टाउको दुखाइ हो।
जो व्यक्ति एकदमै कोलाहाल ठाउँमा बस्छ अथवा एकदमै गन्ध वा सुगन्ध आउने ठाउँमा बस्छ। जो एकदमै घाममा बस्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि माइगे्रन हुने सम्भावना हुन्छ।
माइग्रेनको प्रत्यक्ष सम्पर्क ग्यास्ट्राइटिक्ससँग पनि हुन्छ। जस्तैः खाली पेट बस्ने, ब्रत लिने तथा समयमा खाना नखाँदा पनि माइग्रेन हुन्छ। निद्रा नलाग्ने व्यक्तिलाई पनि माइग्रेन हुने समस्या हुन्छ। एकदमै विलासी जीवन बिताउने, तनाव लिने, शारीरिक व्यायाम नगर्ने व्यक्तिलाई पनि यो समस्या देखिने गरेको छ।
टाउको दुख्ने समस्या अधिकांशलाई हुन्छ । तर के कारणले टाउको दुखेको हो भन्ने कारण भने कमैलाई थाहा हुन्छ ।टाउको दुखाइ ठूलै समस्या नभए पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा बाधा पुर्याउने काम भइरहेको हुन्छ । कतिलाई टाउको दुखाइले निकै पीडा दिन्छ ।
यदि माइग्रेनकै कारणले टाउको दुखेको हो भने शतप्रतिशत निको पार्ने पाकृतिक उपचारको बारेमा तपाईंलाई जानकारी गराउने छौँ ।प्राकृतिक उपचार हाम्रो स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हो । माइग्रेन के हो, कसरी हुन्छ, न्यूनीकरण र प्राकृतिक उपचारका बारेमा ३ दशकभन्दा लामो समयदेखि प्राकृतिक उपचार गराउँदै आएका डाक्टर क्षितिज बराकोटीले जानकारी गराएका छन् ।
माइग्रेन अन्य समस्याले हुने रोग हो, जसले गर्दा विशेषगरी टाउकोको भाग धेरै दुख्छ । माइग्रेनले निश्चित समयमा कसैलाई एक महिना, कसैलाई ढेड महिना र १५, २० दिनमा पनि टाउको दुख्ने हुन्छ ।माइग्रेनको दुखाइ ३, ४ दिनसम्म पनि रहन सक्छ । सामान्यतया माइग्रेनले टाउकोको आधा भाग दुख्छ । कसैको दाहिने त कसैको देब्रे भाग दुख्ने गर्छ ।
माइग्रेनको पीडा बिरामीले सहन नसक्नेसम्मको पनि हुन्छ । यसको दुखाइ निकै गाह्रो र कठिन हुन्छ । टाउको दुखाइसँगै आँखा धमिलो देख्ने, रिँगटा लाग्ने, वाकवाक लाग्ने र वान्त हुनेसम्म हुन्छ ।यस्तै आलश्य हुने, काम गर्न मन नलाग्ने, दिमागले अन्य कुरा सोच्न नसक्ने अवस्थासम्म पनि बिरामीलाई पुर्याउन सक्छ ।
खानापान र जीवनयापन, दैनिक जीवनमा आउने विभिन्न समस्याका कारणले पनि माइग्रेन हुनसक्छ । हामीले खाने चकलेट, कफी, बट्टामा राखेको अचार, चिसो, पेयपदार्थ, धुलो, घाँम, गन्धले पनि माइग्रेनलाई बढाउन सक्छ ।
माइग्रेनमा निश्चित साइकलमा दुख्छ तर माइग्रेन बढाउने खानपान नखाँदासम्म माइग्रेन बढ्दैन । पिनास र माइग्रनेका लक्षण उस्तैउस्तै पनि हुन सक्छन् । तर माइग्रेन केही समय दुखेर निको हुन्छ भने पिनास निरन्तर दुखिरहन्छ ।
प्राकृतिक चिकित्सामा समस्या समाधानको उपाय पनि खोज्छौँ । जस्तै हामीकहाँ आउने बिरामीलाई माइग्रेनको लागि गरिने खानपान, व्यायम, व्यवहार धेरै कुराको बारेमा जानकारी गराउँछौँ । प्राकृतिक चिकित्सामा जलआहार, उपवासलगायतका विभिन्न विधि गराउँछौँ।
टाउको दुखेको छ भने पहिला टाउकोमा चिसो पट्टी बाध्ने, त्यसपछि टाउँकोको पार्ट पार्टमा थिच्नुपर्छ । अर्काे कुरा हातको आैलाका टुप्पा टुप्पामा थिच्ने गर्नुपर्छ, औँलाको टुप्पामा घुमाई–घुमाई थिच्ने र यो क्रम हात र खुट्टाको प्रत्येक औँलामा एकदेखि २ मिनेटसम्म गर्नुपर्छ। यस्तै; हत्केलाको बीच भागमा पनि प्रेसर दिने र बुढी औँला, चोर औँलाको कापमा प्रेसर दिने यस्तोगर्दा टाउको दुखाइ तत्कालै कम हुन्छ ।
Don't Miss it मृगौलामा भएको पत्थरीलाइ कसरी घरेलु उपायद्वारा हटाउन सकिन्छ ?
Up Next दिमागमा धेरै कुराहरू खेलेर तनावमा हुनुन्छ ? दिमागी सन्तुलनका लागी यसाे गर्नुहाेस